est Best Gold Trading ပွဲစားများ 2022 | အခမဲ့ Pro ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်!
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခွဲမှနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အတွင်းရွှေသည်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ တကယ်တော့မင်းကရွှေ ၁ အောင်စကိုမနက်ဖြန်မနက်မှာပေါင်မုန့်နဲ့အတူတူနီးပါးရရှိနိုင်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဘဝပြောင်းလဲသည့်ကံကြမ္မာကိုရွှေရှာဖွေရန်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြသည်။ Treasure of Sierra Madre ကဲ့သို့သော 'ရွှေဖျားနာ' ရုပ်ရှင်များသည်အင်တာနက်ပေါ်မှရွှေနှင့်မိုင်တစ်သန်းအကွာတွင်ရှိသည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များကကျွန်ုပ်တို့အားအရူးအမူးမဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ခံစားမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးသည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရွှေကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့် 'ရွှေအမှား' ဖြစ်လိုလျှင် - သင်သည်နေရာမှန်သို့ရောက်နေပါပြီ။ စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ပွဲစားတစ်ယောက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။
သို့သော်ရာနှင့်ချီ။ ရွေးချယ်ရန် - မှန်ကန်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ - အွန်လိုင်းအာကာသအတွင်းရှိအကောင်းဆုံးရွှေအရောင်းပွဲစားများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။
၎င်းအတွင်းတွင်၊ ရွှေတန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပုံမှ ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရောင်းဝယ်ပုံအထိ အရာအားလုံးကို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအချက်များနှင့် သင်ရင်းနှီးပြီးသည်နှင့် ရွှေအရောင်းအဝယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဗျူဟာအချို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး စဉ်းစားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းရွှေကုန်သွယ်ပွဲစား ၅ ဦးကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပါမည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်သည်၎င်း၏အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်အမြတ်ရရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ရောင်း ၀ ယ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှရွှေကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ၊ ထိုလောဘ၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ခံယူချက်ရှိသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ခံစားမှုများကိုသင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်သည်သင်၏အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ရာသင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ရွှေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ မင်းတို့ကိုရေတိုမှာရောင်းဝယ်ဖို့ပိုများပါတယ် တစ်ရက်ကုန်သွယ် ဥပမာ။ ရွှေဖြင့်ရောင်းဝယ်သောနေ့သည်များသောအားဖြင့်မိနစ် (သို့) နာရီအနည်းငယ်အတွင်းအနေအထားကိုဖွင့်ထားခြင်းပါဝင်သည်။
ရွှေကိုတစ်ရက်ထက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ရောင်းလိုလျှင်၊ လွှဲကုန်သွယ်သင်၏ရွှေကုန်သွယ်မှုကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှဖွင့်လှစ်ထားသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ရွှေကိုနောင်တွင်သင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အခြေခံများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
ရွှေရောင်းဝယ်ရေးတွင် ရေပန်းအစားဆုံးနည်းလမ်းမှာ အသုံးပြုရန်မှာ သေချာပါသည်။ CFDs - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကို အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲ ရောင်းဝယ်နိုင်စေခြင်း။ အကယ်၍ သင်သည် ရွှေကို ရေရှည်အခြေခံဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုပါက - ရွှေ CFD များနှင့် ၎င်းတို့၏အခကြေးငွေများကို လွှဲရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့်စျေးနှုန်းသည် '၀ ယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအား' အပေါ်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကိုးကားထားသည့်စျေးနှုန်းသည်ဝယ်ယူလိုသောရွှေဝယ်သူအရေအတွက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများရောင်းဝယ်သည့်ပစ္စည်းပမာဏ (ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများ) အကြားဆက်နွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရွှေကိုနှစ်ပေါင်း ၂ ဝဝဝကျော်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသည်ဟုယူဆရပြီးအဓိကငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်စီးပွားရေးမရေရာမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
ရွှေတန်ဖိုးသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားပြီးဒုတိယအနေဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ စျေးကွက်ကျန်းမာသည်ဟုယူဆရသောအချိန်များတွင် - စီးပွားရေးမရေရာမှုများတွင်ကုန်သည်များစွာသည်ရွှေတံတားသို့စီးလာခြင်းကြောင့်ရွှေစျေးသည်များသောအားဖြင့်ကျဆင်းသွားသည်။
ရွှေစျေးနှုန်းကိုများသောအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်အခြားအဓိကကျသောငွေကြေးဖြင့်တိုင်းတာသည်။ တစ်ယူနစ်အလေးချိန်နှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ရွှေကိုဂရမ်၊ အောင်စသို့မဟုတ်ကီလိုဂရမ်ဖြင့်ပြလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရွှေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်များသောအားဖြင့်ကိုးကားလေ့ရှိသည်။ ဤအချက်၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာအများဆုံးတောင်းဆိုသောငွေကြေးဖြစ်သည်။ အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အစုရှယ်ယာများကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတွင်သာဖော်ပြလေ့မရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ထိုအချက်နှင့်အတူသင်အခြားငွေကြေးဖြင့်ငွေသွင်းလျှင်အရေးမကြီးပါ၊ သင်၏ရွေးချယ်သောရွှေကုန်သည်ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်ရေး၏အမှတ်အသားဖြစ်ရုံဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းလိုက်ပြီဆိုလျှင်သင်သည် go-go မှရွှေကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွှေရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်သည်စီးပွားရေးအတွက်အမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၎င်းမှာ ၂၄/၇ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာကိုသင်စဉ်းစားပါကကမ္ဘာ့ရွှေ ၉၀% ကိုအမေရိကန်အနာဂတ်စျေးကွက်များ၊ Shanghai Gold Exchange (SGE) သို့မဟုတ် London OTC စျေးကွက်များမှတဆင့်ကုန်သွယ်သည်။ စျေးတခုတခုပိတ်ထားရင်နောက်တစ်ခုဖွင့်လိမ့်မယ်။
မတူညီသောရွှေအရောင်းပွဲစားများသည်မတူညီသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏စင်မြင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်သာကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ eToro ကိစ္စတွင်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့နှင့်သောကြာနေ့မနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင်သင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ယခုငါတို့ရွှေကုန်သွယ်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးမည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းပြီးပါပြီ။ အွန်လိုင်းကိုသင်မည်ကဲ့သို့ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုလေ့လာကြပါစို့။
'ခြားနားချက်အတွက်စာချုပ်များ' (CFDs) ကို အသုံးပြု၍ ရွှေအရောင်းအဝယ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရောင်းဝယ်ရာတွင်အဓိကစျေးကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တကယ်လို့မြင်သာထင်သာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲရွှေကိုဝယ်ပြီးရောင်းနိုင်တဲ့အသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် CFDs ကနေတစ်ဆင့်ရွှေအရောင်းအဝယ်ကမင်းအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
နည်းနည်းထပ်ရှင်းပြရအောင်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသင်ဟာ CFD ပုံစံနဲ့ရွှေရောင်းတဲ့အချိန်မှာရုပ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုမင်းပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား, ရွှေ CFDs ဒီမြင်ကွင်းရွှေအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုခြေရာခံ။ သင်၏အခန်းကဏ္goingမှာရွှေသို့မဟုတ်တက်နေသောတန်ဖိုးကို အခြေခံ၍ အမှာစာကိုမှန်ကန်စွာနေရာချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏ပွဲစားအကြားစာချုပ်ဖြစ်သည်။
ရွှေအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်း CFDs နှင့်ပတ်သက်သောဥပမာများကိုသင့်အားဥပမာပေးကြပါစို့။
ရွှေစျေးနှုန်းသည် ၁,၀၀၂.၂၂ မှ ၁၉၀၉.၂၁ သို့တက်ခဲ့သည်
ဤပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည် ၀.၃၆% တိုးလာသည်။
ရွှေ CFD သည်ဤတိုးတက်မှုကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်
အကယ်၍ ရွှေတန်ဖိုးသည် ၀.၁၈% ကျသွားပါကသင်၏ရွှေ CFD သည်၎င်းကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်
ရွှေ CFD များနှင့်ပတ်သက်၍၊ ပွဲစားအများစုသည် တစ်စုံတစ်ရာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကော်မရှင်အခကြေးငွေဖြင့် ကောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါတင်မကဘူး၊ ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွေက ဖောက်သည်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပေးလေ့ရှိတာကို တွေ့ရတယ်။ န့် ဤပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားတွင်၊ လွှမ်းမိုးမှုအား ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
အကယ်၍ သင်သတိမထားမိပါကသြဇာသည်သင့်အားသင်ယခင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးသည်ထက် ပို၍ ကြီးမားသောလောင်းကြေးများဖြင့်ရွှေကိုရောင်းဝယ်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပွဲစားထံမှချေးငွေကိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောချေးငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ထိုအရာများနှင့်အတူ၊ ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပတို့တွင် ESMA သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကန့်သတ်မှုများကြောင့်သင်သည် 1:20 တွင် (တစ်ခါတစ်ရံ 20x အဖြစ်ပြသ) ခံရနိုင်သည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်သင်သည်သင်၏အစုရှယ်ယာအဆ ၂၀ နှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုငွေကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ပေါင် ၁၀၀ သည်ပေါင် ၂,၀၀၀ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ CFDs မှတစ်ဆင့်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါစျေးနှုန်းကျသွားလျှင်အကျိုးအမြတ်လည်းရနိုင်သည်။ ၎င်းကို 'တိုတိုသွားခြင်း' ဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ရွှေ CFD ကုန်သွယ်မှု၏အခြားရိုးရှင်းသောဥပမာအတူတူထားပါတယ်:
မင်းရဲ့ပွဲစားကရွှေကိုအောင်စကို ၁,၉၀၉.၂၁ ဒေါ်လာနဲ့ပြောတယ်ဆိုပါစို့
သင်ရောင်းရန်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်
မင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှန်ပါတယ် - ရွှေစျေးက ၂% ကျသွားတယ်
မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ရောင်းတဲ့အမှာစာမှအမြတ်အစွန်း ၃၀ ရတယ်
သငျသညျဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ရွှေကုန်သွယ်ပွဲစားကကမ်းလှမ်း 1:20 သြဇာအသုံးချဖို့ရွေးချယ်ခဲ့လျှင်, သင်၏ $ 30 အမြတ်အစွန်း $ 600 အထိမြင့်တက်နိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုသတိထားနှင့်သြဇာလျှောက်ထားသင့်ကြောင်းလုံလောက်သောအလေးပေးလို့မရပါဘူး။ သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သော်လည်းသင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုလည်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
လူအများစုတို့သည်ရွှေကို CFD များမှတဆင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြသည်၊ သို့သော်ဤအဖိုးတန်သတ္တုကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်အခြားနည်းများရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဥပမာတစ်ခုမှာရွေးချယ်စရာပုံစံဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ရွေးချယ်စရာ 'စာချုပ်' ဟာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်နေ့ကိုအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။
သင်သည်ရွှေတန်ဖိုးမြင့်တက်လာမည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကသင်သည် 'ခေါ်ဆိုမှု' ရွေးစရာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါသပိတ်စျေးနှုန်းအောင်စနှုန်း $ 1,800
ဆိုလိုသည်မှာရွေးချယ်စရာကန်ထရိုက်များသက်တမ်းမကုန်မီ (သို့) မတိုင်မီရွှေစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ကျော်မည်ဟုသင်ထင်သည်
စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏“ ပရီမီယံ” ကြိုတင်ငွေကိုသင်ပေးရပါမည်။ ဒီအခြေအနေမှာကန်ထရိုက်စျေးနှုန်းရဲ့ ၅% ရှိတယ်။
ကန်ထရိုက်တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၉၀ ဖြစ်သည် (ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ ၏ ၅%)
ဤအချက်မှာအရာနှစ်ခုမှတစ်ခုသာဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ရွှေသည်စျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်ပါကသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိုဈေးနှုန်းအတိုင်း ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှေသည်အောင်စဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ တန်လျှင်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားလျှင်သင်ကိုင်ထားသည့်အဆက်အသွယ်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀ (ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ လျော့။ ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ သပိတ်မှောက်) ။ အကယ်၍ ရွှေသည်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ထက်မကျော်လွန်ပါကသင်၏ပရီမီယံကိုသင်ရှုံးသည်။ တစ်ဖန်စာချုပ်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၉၀ ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်မှီတွင်ရွှေတန်ဖိုးကျသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင် 'put' options ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါဥပမာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။
ရွှေအနာဂတ်သည် CFD များနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ သင်သည်ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းနိုင်သည်သာမကလျှောက်ထားနိုင်သည် သြဇာ။ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရွှေအနာဂတ်သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများနှင့်မတူသည်မှာသင်၌တစ်ခုရှိသည် တာဝန် အနာဂတ်ကုန်ဆုံးပြီးသင်ကန်ထရိုက်များဆက်လက်ရှိနေသေးလျှင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်ရန်။ များသောအားဖြင့်အနာဂတ်ကိုငွေသားဖြင့်ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ရာသင်၏အိမ်တွင်ရွှေထည်တုံးများဖြင့်ထရပ်ကားတစ်စီးရရှိရန်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကန်ထရိုက်တွေဟာများသောအားဖြင့်တစ်လမှာ ၃ လလောက်ပဲကြာတယ်။ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါသင် ၀ ယ်ယူရမည်သို့မဟုတ်ရောင်းမည် - သင်ထင်မြင်သည့်နည်းလမ်းပေါ်မူတည်သည်။ ရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့အနာဂတ်သည်အမြဲတမ်းသပိတ်မှောက်မှုဖြင့်သာလာသည်။ တစ်ဖက်တွင်, သင်သည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်သည့်အခါအဘယ်သူမျှမပရီမီယံမရှိပါ, ဒါကြောင့်သင်ကသြဇာလျှောက်ထားမဟုတ်လျှင်သင်စျေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့အများကြီးပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုထွက်ဖှဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဤအတွဲကို မည်သို့ပြသမည်နည်း၊ XAU / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အချိန်များ၌ရွှေသည်စျေးတက်သွားတတ်သည်။ သင်အားနည်းနေသောဒေါ်လာကိုအတန်အသင့်အကာအကွယ်ပေးသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင် hedging ကြောင့် overcompensed သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရွှေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါ ETFs ရွှေဝယ်နိုင်သော်လည်း သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ETF မှတစ်ဆင့် ရွှေကို သင်မည်ကဲ့သို့ဝယ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အမြန်ဥပမာတစ်ခုပေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ပါ။
သင်သည်သင်၏ပွဲစားမှတဆင့် VanEck Vectors Gold Miners ETF ကိုဝယ်ယူပါ။
ဤ ETF သည် Arca Gold Miners Index ကို စောင့်ကြည့်သည်။
ယခုအခါတွင် သင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အကြီးကျယ်ဆုံး ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
သင်သည်ရွှေကိုယ်နှိုက်သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်မလိုဘဲ၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီအစားဒီအခန်းကဏ္providerကို ETF ပံ့ပိုးသူအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။ eToro ကဲ့သို့သောလေ့လာသူများအတွက်လွယ်ကူသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ သင်သည်အထက်ပါ ETF ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀ သာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည် - ၁၀၀% ကော်မရှင်အခြေခံ။
အွန်လိုင်းတွင်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်နည်း။ အောက်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွှေသုံးခုကိုတွေ့လိမ့်မည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ အားလုံးပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူလူကြိုက်များကြသည်။
ရွှေလွှဲကုန်သွယ်မှုပိုမိုကျယ်ပြန်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နာပါဝင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုခန့်မှန်းရန်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ရွှေအရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာပါကသင်သည် '၀ ယ်ယူ' သည့်အနေအထားမှအမြတ်အစွန်းများကိုအောင်မြင်စွာရယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ရာထူးကိုရက်ပေါင်းများစွာမှတစ်ပတ်လျှင်တစ်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖွင့်နိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အခြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းတော့မည်။ ဤဥပမာတွင်သင်၏ရှည်လျားသောရာထူးကိုငွေထုတ်ချေးခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအမိန့်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်အထောက်အပံ့အဆင့်တွေဟာစျေးနှုန်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ထဲမှာထောက်ခံမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုပြသသည်။ ဤအဆင့်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သာဓကအားဖြင့်ရွှေသည်အောက်သို့ကျဆင်းနေပါက 'stop level' ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤသည်ထပ်မံကျဆင်းသွားပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြိုက်များသောနည်းဗျူဟာမှာ၎င်းကိုထောက်ပံ့သောလိုင်းအထက်ရှိစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားအတော်အတန်စွန့်စားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဉီးခေါင်းရေ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျိုးနွံအမြတ်ရဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ရွှေကုန်သည်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါ။ ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့တည်းတွင်ရာထူးများစွာ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုဖွင့ ်၍ မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်အခြေအနေများတွင်ရှင်သန်နိုင်သည်။
ဒီတစ်ခုသိသာထင်ရှားနေသော်လည်းအခကြေးငွေများသည်မည်သည့်အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းမှအလွယ်တကူပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုငွေလွှဲနှုန်းတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ရာထူးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်သင့်အားစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၃၀ ပေးရလိမ့်မည်။
ပွဲစားများအတွက်ကော်မရှင်အခကြေးငွေကောက်ခံရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာကုန်သွယ်မှု၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က ၂% ကောက်ခံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လောင်းကြေးဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်လျှင်သင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၂ ပေးလိမ့်မည်။ သတင်းကောင်းမှာ - ပွဲစားများသည်ရွှေ CFDs များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လုံးဝ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောထိပ်တန်းရွှေအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးနှင့်ထိုသို့ပင်!
ကြည့်ရမည့်နောက်ထပ်အခကြေးငွေမှာညအိပ်ရန်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သြဇာကို သုံး၍ နေ့ချင်းညချင်းဖွင့်ထားလျှင်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်သင့်ကိုအတိုးယူလိမ့်မည်။ ၄ င်းသည်တစ်ညတည်းငွေကြေးဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ဖြစ်စေ၊ တက်တက်ကြွကြွမရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်စေအခကြေးငွေဖြစ်ပါစေ - သင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုမီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းရှိအခကြေးငွေဇယားကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသွားလာရန်လွယ်ကူစေရန်သင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည်၊ အထူးသဖြင့်သင်သည်အသစ်ရှာဖွေသောရွှေကုန်သည်ဖြစ်ပါက။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်ကြိုးများကိုလေ့လာနိုင်သည့်နှုန်းကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ Skilling ကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ကုန်သွယ်မှုကိုအလွန်လွယ်ကူစေသည်၊ ကုန်သွယ်ရန်ပစ္စည်းရှာရန်လွယ်ကူသည်။
သငျသညျစုဝေးစေခြင်းငှါသကဲ့သို့, ပွဲစားအားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အခကြေးငွေများ၊ ပြန့်ပွားမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ စျေးကွက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီးလက်ခံသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အား Mastercard မှတစ်ဆင့်သာငွေရေးကြေးရေးလုပ်နိုင်လျှင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ထိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးရွှေအရောင်းပွဲစားများသည် debit / credit card၊ e-wallets နှင့် bank transfer များမှတဆင့်အပ်နှံခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးရွှေရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူ တစ်ဦးအထိသာ စာရင်းသွင်းရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ FCA သို့မဟုတ် အခြားသော လေးစားထိုက်သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့။
၎င်းသည်သင်လုံခြုံပြီးလုံခြုံသောဝန်းကျင်၌ရွှေတူရိယာများကို ၀ ယ်ယူရောင်းချနိုင်မည်ကိုသေချာစေသည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားသည်စည်းမျဉ်းမကျပါက - သို့မဟုတ်၎င်းသည်သံသယရှိသောအဖွဲ့နှင့်လိုင်စင်ရရှိထားလျှင်၎င်းကိုသင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ ဆိုသည်မှာ ၀ ယ်သူ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရွှေရောင်းသည့်စျေးနှုန်း (သို့မဟုတ်သင်ရောင်းဝယ်သောကုန်ပစ္စည်းများ) အကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည်အလွန်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, Skilling ဟာအလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွား 600 ပေးကမ်းလှမ်းခဲ့သည် pips ရွှေ CFDs ကုန်သွယ်တဲ့အခါ။ ပြန့်နှံ့လေလေ၊ သင့်အမြတ်အစွန်းများလေလေဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဟာအရမ်းကိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဤအမှု၌ပြီးပြည့်စုံသောလေ့လာသူဖြစ်လျှင်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များထွက်စစ်ဆေးပါ!
Gold Trading Books ကိုဖတ်ပါ
တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့အနေနှင့်သော်လည်းစာဖတ်လိုပါကသင်စျေးကွက်တွင်သင်ကြားရန်အတွက်ရွှေကုန်သွယ်ရေးစာအုပ်ထဲသို့ ၀ င်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သင်ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်၏အဆင်ပြေမှုကိုပိုနှစ်သက်ပါကရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အော်ဒီယိုစာအုပ်များစွာရှိသည်။ အချို့ပွဲစားများသည်ကောင်းမွန်သောပညာရေးဗီဒီယိုများနှင့်စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။
အဓိကအားဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးသတင်းများသည်ရွှေနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်ဆက်နွှယ်နေခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအင်တာနက်ကိုသင်၏အားသာချက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီနောက်ဆုံးပေါ်ဘဏ္newsာရေးသတင်းများကိုပံ့ပိုးပေးသူအများအပြားရှိသည်။
Gold Trading Signals ကိုသုံးပါ
ဤအချက်အလက်များသည်ဘဏ္theာရေးသတင်းများနှင့်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်အတွက်အချိန်မရှိသောကုန်သည်များအားသက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် '၀ ယ်' နှင့် 'ရောင်း' အချက်ပြများကိုသတင်းပေးပို့နိုင်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုတွေကိုသုံးတဲ့အခါအမြတ်အစွန်းရနိုင်ခြေရှိတဲ့အကြံပေးချက်ကိုသင်ရတယ်။
သင် ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေမရောင်းသည်စသည်ဖြင့်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ Learn2Trade အချက်ပြများသည် Forex နှင့် cryptocurrency စျေးကွက်များတွင်အထူးပြုသော်လည်းအမြတ်အစွန်းရစေသောအခွင့်အလမ်းပေါ်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရွှေမြင်ကွင်းတွင်အချိန်ကုန်သွားလေ့ရှိသည်။
eToro ကဲ့သို့သောပွဲစားအချို့သည်ဖောက်သည်များအားအောင်မြင်သောအပြည့်အ ၀ စစ်ဆေးပြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ကုန်သွယ်မှုများကိုကူးယူရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀ သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ၏သက်သေအထောက်အထားခိုင်မာသောမှတ်တမ်းကိုထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်ကူးယူနေသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ၀ ယ်ယူမှု ၀.၈% နှင့်ညီမျှသော“ ၀ ယ်ယူ” မှုအမိန့်ကိုနေရာချလျှင်သင်၏အစုစု၏ ၀.၈% သည်ဤအချက်ကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ မိတ္တူကူးကုန်သည်များအတွက်စဉ်းစားစရာများရှိပြီးသင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
သရုပ်ပြအကောင့်များအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ (က) ရွှေအရောင်းကြိုးများကိုလေ့လာခြင်းနှင့် (ခ) သင်၏အရင်းအနှီးကိုမစွန့်စားဘဲကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးခြင်း။
Skilling ကိုဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း - ပလက်ဖောင်းသည်ဖောက်သည်များကိုရွှေ CFDs များကိုသာမကစျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သောအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုပေးသည်။
ရွှေအရောင်းအဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတာတွေအများကြီးသိပြီ။ မင်းရဲ့စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အမှာစာတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပွဲစားကောင်းတစ်ယောက်ရှာဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးသင်လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေသောအခါသူတို့သည်သင်စိတ်ဝင်စားသောရွှေစျေးကွက်များသို့သူတို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ပွဲစားအားလုံးသည်တူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စျေးကွက်ကိုမကမ်းလှမ်းနိုင်ပါ။ သင်၏သုံးသပ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင် UK ရှိအကောင်းဆုံးရွှေကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများစာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
၄။ AVATrade - အပြိုင်အဆိုင်ပြန့်နှံ့သောရွှေ CFD များကိုရောင်းဝယ်ပါ
AvaTrade သည်လူသိများသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များအားရွှေ CFD နှင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးသည့် Forex နှင့် cryptocurrencies ပုံစံများအပြင်အခြား CFD အမျိုးမျိုးရှိသည်။
၎င်းသာမကရွှေဝယ်ယူလိုသူများအတွက် AvaTrade 'AvaTradeGO' လျှောက်လွှာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမှာစာများနှင့်အင်တာနက်ကိုသင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်၏အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းနိုင်သည်။
MT4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း - ဤပွဲစားသည် ၀ ယ်သူများကိုစက္ကူရန်ပုံငွေများပါ ၀ င်သည့်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်အကောင့်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သရုပ်ပြအကောင့်များသည်လူသစ်များကိုလေ့လာရန်ကူညီရာတွင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော၊ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်နည်းဗျူဟာအသစ်များကိုစမ်းသပ်ကြသည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်သာရှိသည့်ရွှေ CFD ဖြင့်သင်စတင်နိုင်သည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော် min သိုက် $ 100
ရွှေကုန်သွယ်မှုအပေါ် 1:20 ၏သြဇာ
၂။ Capital.com - ယှဉ်ပြိုင်မှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်ကော်မရှင်ကင်းသောရွှေရောင်းဝယ်မှု
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ လိုင်စင်များကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော၊ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသော ပွဲစားတစ်ဦးနှင့် ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးတွင် ဖောက်သည်များအား ကော်မရှင်အခမဲ့ ကုန်သွယ်မှုကို ပေးဆောင်သည်။
ရောင်းဝယ်နိုင်သော CFD ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Forex၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ စတော့များနှင့် ရွှေကဲ့သို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ Capital.com တွင် ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေသော်လည်း ESMA ကန့်သတ်ချက်များအရ ရွှေကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်မှုမှန်သမျှကို 1:20 တွင် ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
Capital.com သည် credit / debit ကဒ်များ၊ ငွေလွှဲခြင်းနှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets စသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။ သင်စတင်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးငွေပမာဏသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပေါင် ၂၀ ဖြစ်သည်။
သုည - ကော်မရှင်နှင့်အတူရွှေကုန်သွယ်
FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ယခုပင်လျှင် Gold Trading ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်ပါ
အခုအွန်လိုင်းမှာရွှေရောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်သည်ရွှေကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုန်သွယ်နိုင်သည်။
အဆင့်တစ် - ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြင့်စာရင်းသွင်းပါ
သင်မှတ်ပုံတင်ရန်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်ရွေးသည်ဟုယူဆကြပါစို့။ ပထမအချက်မှာကုန်သွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီး 'sign up' ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံ၊ လူနေအိမ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ FCA နှင့် CySEC တို့ကဲ့သို့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများကပြဌာန်းထားသော KYC စည်းမျဉ်းများအရနောက်ပိုင်းတွင်သင်၏ ID ကိုရှင်းလင်းစွာဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခုကမင်းရဲ့ရွှေကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အသစ်ထဲကိုရန်ပုံငွေအချို့ထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ်။ ဤအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် - သင်ထည့်သွင်းလိုသည့်ငွေပမာဏကိုသာထည့်သွင်း။ လက်ခံနိုင်သောရွေးချယ်စရာများစာရင်းမှငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
မည်သည့်လမ်းအပေါ် မူတည်၍ ရွှေစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ထင်သနည်း - ယခုသင်၏ရာထူးအတွက်သင့်တော်သောအမိန့်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်၏ရွှေကုန်သွယ်မှုစွန့်စားမှုကိုစတင်ရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာစျေးကွက်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာသင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးရွှေအရောင်းပွဲစားကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအစမှအဆုံးထိဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဤငွေလက်ကျန်အားမည်သို့ရောင်းဝယ်သည်ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသင့်သည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရန်အသင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းထားသောအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်လိုင်စင်ရထားပြီးသင်၏လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွှေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေမယ့်မသင့်တော်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်မရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက်။ သိုလှောင်ရန်လိုအပ်ချက်မရှိခြင်း၊ အခကြေးငွေနည်းခြင်းနှင့်အာမခံကြေးနည်းခြင်းတို့သည် CFD များအားကုန်သည်အများစုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းကရွှေကိုသြဇာသုံးပြီးရောင်းနိုင်တယ်။ ပွဲစားတော်တော်များများသည်ဖောက်သည်များကိုရွှေ CFDs ၁:၂၀ လောက်လောက်ကမ်းလှမ်းသည်
သင်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရွှေကုန်သွယ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ Skilling ကဲ့သို့သောပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များအား 'စက္ကူရန်ပုံငွေ' (demo money) ဖြင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုပေးသည်။
ဟုတ်တယ်။ လူတွေကရွှေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာရောင်းဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူဘူး။ Skilling သို့မဟုတ် eToro ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်တရားဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းသင်သိသည်။